पोखरामा सोनिका र पारस मस्ती मुडमा, बाहिरियो अर्को रोचक भिडियो
रेड ड्रेसमा सोफामा बसेकी मोडल सोनिया रोकाया लि पसिङ गर्छिन्, ‘दिल खोलेर भन्न पो भा छैन तर कल्लालाई था छैन।’ केही दुरीमा कालो गगल्स र कालै ड्रेसमा उभिएका युवाको नजर पनि टिकटक बनाइरहेको मोबाइलको क्यामरातिर पर्छ। सोनिका पछाडि औंलाले देखाउँदै गीत गाउन मस्त छिन्। पछाडि उभिएका युवा मुसुक्क हाँस्छन् र क्यामराबाट पर हट्छन्। सोनिका मज्जाले हाँस्छिन्।
युट्युबर हुँदै मोडलिङमा प्रवेश गरेकी सोनिका सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका क्लिपहरु दिनकै आउँछ। पछिल्लो यो क्लिप भने १६ हजार बढीले मन पराइसके। एक हजार बढी सेयर भइसक्यो। ३ सय ९ वटा प्रतिक्रियाले बक्स भरिएको छ।
एउटा प्रतिक्रिया छ, ‘भविष्यको हाम्री राजकुमारी ! काँटछाँट सबै मिलेको छ। राजकुमारीमा हुनुपर्ने सबै गुणहरु भिडियोहरुमा बनाइसक्नुभएछ। बधाई छ।’
यो क्लिप भाइरल हुनु र यस्तो प्रतिक्रिया आउनुको कारण हो, पूर्व युवराज पारस शाह। सोनिकाले बनाएको टिकटकमा मुसुक्क हाँसेर साइड लाग्ने युवा उनै पारस हुन् अनि टिकटक खिचिएको दृश्य पोखराको कुनै होटलको।
सोनिकाको टिकटक अकाउन्टमा यो क्लिप आउनुअगाडि नै पारस र उनीसँगै भएको अर्को भिडियो क्लिप भाइरल भइसकेको थियो। त्यो भिडियो पनि टिकटकमै आएको थियो। सुमनएट प्रयोगकर्ताले सडकमा हार्लिडेभिड्सन बाइक रोकेर बसिरहेका पारससँग केही व्यक्तिले कुराकानी गर्दै ‘खिचेर हाल्दाखेरी हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, त्यही भएर हामी आएको, हामी तपाईंको कार्यकर्ता हो’ भन्छन्।
पारस भड्कन्छन्, ‘राजावादी नभन्नुस् के ! यो वादी, त्यो वादी भनेको छुट्टयाउने कुरा हो।’ यता चोकमा बहस भइरहँदा उता परबाट चेक पेन्ट र रेड टप लगाएकी युवती पारसतिरै आउँछिन्। पारस ‘यो वादी त्यो वादी नभनौं, हामी सबै नेपाली’ भन्दै बाइक स्टार्ट गर्छन् र पछाडि युवती बस्छिन्। बाइक हुइँकिन्छ। यसरी मोटरसाइकल पछाडि बस्ने पनि उनै सोनिका नै थिइन्।
युट्युबमा ओपन संवादका भिडियो बनाएर चर्चामा आएकी सोनिका पूर्वयुवराज पारससित देखिएको यो नै पहिलो पटक भने हैन। उनीहरु बारम्बार सँगै देखिन थालेका छन्। यसअघि नाइट क्लबमा पारस पृष्ठभूमिमा देखिने गरी सोनिकाको केही टिकटक भिडियो आएका थिए। पोखरामा यी दुवै सँगै देखेपछि भने सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी बढेको हो। कतिपयले उनीहरु प्रेममा परेको अड्कल काटेका छन्। भिडियोमा धेरैले पूर्वयुवराज जस्तो व्यक्तिले एउटी युवतीसँग यसरी नारिएर हिँड्नु शोभनीय नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। कतिले ‘देख्यौ त तिमीहरुका राजारानी ?’ भन्दै राजतन्त्र पक्षधरलाई व्यंग्यसमेत गरेका छन्।
शाहज्यादा, युवराज हुँदै पूर्वयुवराज बनिसक्दा पनि आफ्नै व्यवहारका कारण पारस पटक–पटक वि वादमा आइरहेका छन्। कहिले प्रहरी कुटेर त कहिले ट्राफिक नियम तोडेकामा गाडी रोक्न खोज्ने ट्राफिकलाई नै किच्न खोज्ने उनको उग्र व्यवहार देखिइनैरहेको छ।
सुरा र सुन्दरी पनि छुटेको छैन उनको विवादमा। चार वर्ष थाइल्यान्ड बसाईमा उतैकी युवती कन्निका चाइसानसँगको प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक भएको थियो। राजसंस्थाको खारेजीसँगै उनी २०६७ भदौ ११ मा सिंगापुर हुँदै थाइल्यान्ड पुगेका थिए। त्यहीँ उनको सम्बन्ध कन्निकासँग भयो।
यो सम्बन्ध यत्तिमै अड्किएन। कन्निकाले पारस आफ्ना श्रीमान् भएको र उनका तर्फबाट एक जना सन्तानसमेत रहेको भन्दै एक बालकको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
पाेखराका स्थानीय बालिकासँग पारस।
श्रीमती हिमानी शाहसँग उनको ठाकठुक त पुरानै हो। तापनि यी दुवै सँगै निर्मल निवासमै बस्थे। कन्निकासँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि हिमानीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो, जुन अझै सुध्रिएको छैन।
कानुनी रुपमा यी दुवै श्रीमान्–श्रीमती भए पनि सँगै बस्दैनन्। हिमानी निर्मल निवासमा बस्छिन्। पारसलाई निर्मल निवासमा प्रवेश अनुमति छैन।
गम्भीर हृद यघात भएर दुई महिना अस्पतालमा बसाईपछि उनी स्वदेश फर्किए पनि अझै आफ्नो परिवार तथा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बस्ने निर्मल निवासको ढोका उनका लागि खुलेको छैन। उनी महाराजगञ्ज क्षेत्रमै अहिले पनि छुट्टै बस्छन्।
बीचमा पारिवारिक जमघटमा उनी पनि सँगै देखिने गरेका थिए। यसले उनको पारिवारिक सम्बन्ध सुध्रिएझैँ देखिएको थियो। अहिले हिमानी कान्छी छोरीको पढाइका लागि विदेशमा रहँदा सोनिकासँग आत्मिय भिडियो क्लिपहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले निर्मल निवाससँग सुधार हुँदै गएको पारसको सम्बन्ध पुनः चिसिने देखिन्छ।
अहिले दुवैबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा समेत शुरु भएको छ। भिडियो क्लिपमा देखिएको पारस र सोनिकाको निकटता र व्यवहार अनि पारसको सुन्दरी प्रेमसँगै सोनिकाको व्यवहारले पनि चर्चा केवल चर्चा मात्रै हैन भन्ने देखाउँछ।
सोनिका पूर्वयुवराज पारससँग आफू निकट भएको स्वीकार गर्छिन् तर यसलाई प्रेम मान्न तयार छैनन्। पारसले आफूलाई गाइड गरिरहेको र उनीबाट आफू प्रभावित रहेको उनको भनाइ छ।
‘म उहाँसँग नजिक भा’छु तर हाम्रो प्रेम सम्बन्धको कुरा हल्ला मात्रै हो,’ पोखरामा रहेकी सोनिकाले फोनमा शुक्रवारसँग भनिन्, ‘उहाँ मेरो केयर गर्नुहुन्छ, मलाई गाइड गर्नुहुन्छ। हामी मिल्ने साथी मात्र हौँ।’
तर ‘शुक्रवार’ले फेला पारेको विवरणले यी दुवैको सम्बन्ध सोनिकाले दाबी गरेजस्तो साथी मात्रको देखिन्न, साथीभन्दा हल्का माथिकै देखिन्छ।
तीन दिनदेखि पोखरामा
पारस बेलाबेला पोखरा पुगिरहन्छन्। अघिल्लो वर्ष गेरुवस्त्रमा सजिएर पोखरा आएका उनी यस पटक रमाउन आएका देखिन्छन्। पोखरा आउँदा उनी प्रायः लेकसाइडस्थित टेम्पल ट्रि रिसोर्ट एन्ड स्पामा बस्ने गर्छन्।
अहिले सोनिका र पारस तीन दिनदेखि पोखरामै छन्। पारस र सोनिका शुक्रबार पोखरा आएका थिए। बा १९ प २९२ नम्बरको हार्ली डेभिडसन बाइकमा सँगै आएका उनीहरु त्यसयता सँगै बसिरहेका छन्। यसपटक पनि पारसले बस्न टेम्पल ट्रिलाई नै रोजेका छन्। स्रोतका अनुसार पारस टेम्पल ट्रिमा शुक्रबारदेखि कोठा नम्बर ६८ बुक गरेर बसेका छन्। कात्तिक १ गतेसम्म उक्त कोठा पारसको नाममा बुक छ।
साेनिकाकाे टिकटकमा पारस।
पारस र सोनिकाको दैनिकी पनि गजबकै छ। उनीहरु बिहान अबेर उठ्छन्। खान मन भए कोठामै मागेर ब्रेकफास्ट गर्छन्। कहिले गार्डेनमा आएर ब्रेकफास्ट लिन्छन्। उनीहरुको लञ्च र डिनर प्रायः बाहिर नै हुन्छ।
स्रोतका अनुसार सोनिका र पारस दिउँसो दुई बजेतिर होटलबाट बाहिर निस्कन्छन्। त्यसपछि साँझ एक छिन रेस्ट गर्न आउँछन्। राति ९ बजेतिर निस्किएका उनीहरु १२ देखि १ बजे रातमा होटल छिर्ने गरेका छन्।
‘उनीहरु दिनभर बाहिर निस्कन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही समय रेस्टमा आउँछन्। फेरि राती निस्केर अबेर आउँछन्। कहिले कुन बारमा जान्छन्। कहिले कुनमा, सोध्ने कुरा भएन तर उनीहरुको मुड देख्दा भने बडो रमाइरहेको देखिन्छ।’
यी सबै विवरणले सोनिका र पारस बीचको सम्बन्ध र निकटता कुन तहको हो पुष्टि हुन्छ नै।
‘शुक्रवार’ले पुनः सोनिकालाई जिज्ञासा राख्यो, पोखरा डेटमा गएको जस्तो रहेछ नि ?
उनले भनिन्, ‘अब जे कुरा सम्भव नै छैन, त्यो सुन्दा हाँस उठ्छ। म उहाँलाई आदर गर्छु त्यति मात्र हो।’
कहिले त्रिसरा कहिले डुंगा सयर
शुक्रबार पोखरा पुगेका पारस र सोनिका शनिबार टेम्पल ट्रिमै रमाएका थिए। आइतबार यी दुवै लेकसाइडमा रहेको त्रिसरा लाउन्जमा गएका थिए। सोमबार उनीहरु लेकसाइडकै डुंगा रेस्ट्रो एन्ड लाउन्ज बारमा पुगे। डुंगामा रमाउन पुगेका पारस र सोनिकासँग उनका थुप्रै शुभेच्छुकले तस्बिर खिचेका छन्। डुंगामा जाँदा समेत उनीहरु बाइकमै पुगेका थिए।
पारस बसेकाे हाेटेल।
‘पारस र सोनिका सँगसँगै आएका थिए, लामै समय डुंगामा रमाए,’ स्रोतले भन्यो, ‘पारसलाई धेरैले चिने तर सोनिकाबारे भेउ पाएनन्। पारससँग धेरैले तस्बिर खिचाए। ठूलै हुलमुल थियो।’
बा १४ च २१३१ नम्बरको पारस चढ्ने गाडी पोखरामै छ तर उनी गाडीमा भन्दा बढी बाइकमा घुम्छन्। बा १९ प २९२ नम्बरको हार्लिडेभिड्सन बाइकको साउन्डले उनको बाइक आउँदा पोखराका सडकतर्फ सबैको ध्यान तान्छ।
बिन्दास पारस, तना वमा सोनिका
पूर्वयुवराज पारस र सोनिकाको सम्बन्ध भाइरल भएसँगै नकारा त्मक टिप्पणी आएपछि पोखरामा रहेकी सोनिका तना वमा छिन्। उनको मोबाइलमा फोन आएको आयै छ। उनी फोनमै व्यस्त भए पनि पारसको मुड भने बिन्दास छ।
प्रायः उनी हाँसिरहेको अवस्थामा देखिन्छन्। कोही आएर फोटो खिचम् दाइ भन्यो भने शालिन पारामा हस् भन्दै राजी भइहाल्छन्। शुक्रबार पोखरा आइपुगे पनि उनीबारे कसैले चासो देखाएका थिएनन्। उनी पोखरामा रहेको सार्वजनिक भएपछि मंगलबार पारसलाई भेट्न केही युवा होटल ट्रिपल ट्रिमै पुगेका थिए। पारसले उनीहरुसँग करिब दुई घण्टासँगै बिताए। राजनीतिका कुरा गरे।
तीन महिनाअघि गाँसिएको सम्बन्ध
सोनिकाका अनुसार पारससँग उनको चिनजान भएको तीन महिना मात्रै भयो। तीन महिना अगाडि उनले खोलेको लिक्विड लाउन्ज बारको ओपनिङमा पारस शाहलाई निम्त्याएकी थिइन्।
पछिल्लो समय पारस रात्रिकालीन मनोरञ्जनमा हिँड्न थालेका थिए। प्रायः उनी त्रिसरामा देखिन्थे परिवारका साथ। सोनिकाको निम्ता पाएपछि पारस लिक्विड पुगे। उनका साथमा फिल्म निर्माता शोभित बस्नेतसमेत थिए। पारससँग उनको पहिलो तस्बिर त्यही कार्यक्रमको थियो।
त्यसपछि यी दुवैको भेटघाट बाक्लिन थाल्यो। भदौ ३ मा उनले पारससँगै रहेको अर्को तस्बिर फेसबुकमा राख्दै ‘बाघको डमरु लेखिन्।’ त्यसपछि उनीहरु पोखरामा देखिएपछि यी दुवैको निकटता छरपष्ट भयो।
‘पहिलो भेट लिक्विडको ओपनिङमा भएको हो,’ सोनिकाले शुक्रवारसँग भनिन्, ‘मेरो खुला किसिमको व्यवहार देखेर उहाँले मिडियामा राम्रो काम गर्न सक्छौ भनेर उत्साह दिनुभयो। इन्टरटेन्मेन्टका लागि तिमीले लेभल मिलाएर काम गरिरा’छौ भनेर सुझाव दिने मान्छे उहाँ मात्रै हो। त्यस्तो मान्छेलाई मैले बेलाबखत किन नभेटूँ ?’
हिरोइन बन्ने अधुरो सपना
धनगढीमा जन्मेकी सोनिका रोकाया मोडल, युट्युबर अनि व्यवसायी हुन्। बझाङको माझीगाउँ उनको पुख्र्यौली थलो हो। द्व न्द्व कालमा आर्थिक अभावका कारण उनको परिवार धनगढी स-यो। सोनिका परिवारकी जेठी छोरी हुन्। सानैदेखि गाउन अनि नाच्न उनको रुचि थियो। सानैदेखि हिरोइन बन्ने संकल्प बोकेकी उनलाई त्यही सपनाले काठमाडौँसम्म डो-यायो।
कक्षा ५ देखि बुढानीलकण्ठ विद्यालयमा पढेकी उनी होस्टेलमै बस्थिन्। परिवार बझाङमै थिए। सानैदेखि रेखा थापाजस्तै हिरोइन बन्ने सपना बोकेकी उनी रेखालाई पछ्याउँथिन्।
बुढानीलकण्ठमा पढाइ सकेपछि एक वर्ष मोडलिङ गरिन्। हिरोइन बन्न फिल्मकर्मीसँग उनको भेट भयो। केही यस्ता फिल्मकर्मीसँग उनी ठो किइन्, जो महिलालाई गलत दृष्टि कोणले हेर्थे। त्यस्ता फिल्मकर्मीसँग भेटेपछि उनले इन्डस्ट्री छोडिन्। उनको हिरोइन बन्ने सपना पूरा हुन सकेन। हिरोइन हुन्छु भन्ने संकल्प लिएर पत्रकारिता अध्ययन गरिन्। त्यसबीच निर्देशक शोभित बस्नेतसँग उनको प्रेमको हल्ला चल्यो।
उनले ‘केटिएम नेपाल पेज’मा फेसबुक लाइभ अन्तरवार्ता लिन थालिन्। बिस्तारै उनका कामलाई दर्शकले चासो दिन थाले। फेसबुक लाइभमा आधा व क्ष स्थल देखाएको भन्दै आलोचना पनि नभएको होइन।
केटिएमपछि उनले ‘वाउ नेपाल’ नामक युट्युब च्यानलमा भिजे भएर काम गरिन्। सो च्यानलमा उनी यौनसँग जोडेर उश्रृ ङ्खल अन्तरवार्ता पनि लिने गर्थिन्।
कार्यक्रममा उनले प्रयोग गर्ने शब्द र उनले लगाउने पोशाकका कारण आलोचना भए पनि बिस्तारै चर्चामा छाउन थालिन्। सोही च्यानलबाट उनले हजारौं फ्यान कमाइन्।
यसै क्रममा उनले केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय पनि गरिन्। धेरै पटक विवादमा पनि परिन्। करिब दुई वर्ष वाउ नेपालमा काम गरेपछि युट्युब च्यानल छोडिन्। त्यसपछि ‘अब सुध्रिने’ भन्दै युट्युबमा आफ्नै ‘द सोनिका सो’ शुरु गरिन्।
केही महिनाअघि मात्रै उनले काठमाडौंको दरबारमार्गमा लिक्विड लाउन्ज खोलेकी थिइन्।
नेपालगञ्जमा भेटियो चाँदी जस्तो टल्किने शिवको मूर्ति,
कम्पनीको लोगो तथा नाम निर्धारण गर्न वास्तुको ५ ओटा शक्तिशाली नियम
अहिले सामाजिक संजालमा विभिन्न भिडियो भाईरल भएका हुन्छन्...
बैतडीमा एउटा दुःखद घटना घटेको छ। रोजगारीका लागि...
१० हजार मानिससँग शारिरिक सम्बन्ध राखेकी महिला पाइलटको अनुभव
एक महिलाले आफूले १० हजार मानिससँग शारिरिक...
लोकप्रिय नायिका सुष्मा कार्कीको एक भिडियो...
रुपा र कृष्ण वलीलाई पुत्रलाभ (४ तस्विर सहित)
काठमाडौं । रुपा र कृष्ण वली अभिभावक बनेका...
अब स’कियो,भारतको चु’रिफुरी ….नेपाले ना’कामै यस्तो ग’रिदियो ! जय नेपाल,
पछिल्लो सीमा विवादले नेपाल र भारतबीच देखा परेको...
नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले...
काठमाडौं, १९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई...
© Suchanadaily.com All Rights Reserved. Site By : Sobiztrend